Ardayda wax ka dhigata Kuliyadda Ingineeriya ee Jaamacadda Banaadir oo tababar loo furay (SAWIRRO)
Xarunta Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa tababar looga furay ardayda wax ka barata kuliyadda Ingineeriya oo ka mid ah kuliyaddaha ay ka kooban tahay Jaamacaddaas.
Munaasabada furitaanka tababarkan ayaa waxaa ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan Maamulka jaamacadda Banaadir, qaar ka mid ah hormuudyada kulliyadaha iyo macalimiinta wax ka dhiga Jaamacadda iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Jaamacada Banaadir. Dr C/risaaq Axmed Dalmar oo ka hadlay munaasabadaas ayaa sheegay in ujeedada tababarkan ay tahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda wax ka barata kuliyadda Ingineeriya, wuxuuna xusay inuu socon doono muddo bil ah.
“Waxaa farxad inoo ah inaan isugu imaano furitaanka barnaamij ay mar walba bisha fasaxa ah qaban jirtay jaamacada Banaadir oo ah (Summer Seminars) ama tababarada xiliga fasaxa, waxaana sanadkan u dooranay inaan ku bilowno kuliyadda Ingineeriya” ayuu yiri Gudoomiyaha.
Dr. Dalmar ayaa intaa ku daray in kuliyadda Ingineeriya ay tahay kuliyadda labaad ee ugu ardayda badan Jaamacada Banaadir, ayna wax ka bartaan xiligan arday tiradoodu gaareyso 329, wuxuuna xusay iney horey uga qelin jebiyeen 20 Ingineer, ayna dhowaan ka qelin jebinayaan 6 Ingineer oo kale.
Wuxuu xusay gudoomiyuhu in mudada bisha ah ee tababarkan uu socdo ka sokow duruusta la bixinayo ay ardaydu heli doonaan fursado ay ku sameynayaan baraatiko ku saabsan aqoonta ay barteen, isagoo xusay in ardayda baraatikadaas ay ku soo sameyn doonaan xarumaha shirkadaha isgaarsiinta, inernetka, Electronikada, dhismaha iyo qaar kale, waxaana arintaas dedaal ku bixiyey ayuu yiri maamulka jaamacadda.
“Ujeedada kuliyadda Ingineeriya aan u sameynay waxay aheyd sidii ay u soo saari laheyd aqoonyahano ka qeyb qaata dib u dhiska dalka, sida dhismeyaasha, buundooyinka, warshadaha iwm, maadaama dalku uu soo maray dagaalo sokeeye iyo burbur, Maalintii kuliyaddan aan fureynay oo aheyd sanadkii 2005 waxaan ku bilownay 3 arday oo shan sano ku qelin jebiyey” ayuu yiri Dr. Dalmar.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa Dr. Dalmar waxaa uu sheegay in bishan dhamaadkeeda ay Muqdisho iman doonaan wafdi ka socda Jaamacada Makerere ee dalka Ugandha oo uu xusay iney Afrika oo dhan ugu horeyso ingineerinka, heshiis wax wada qabsina uu kala dhexeeyo Jaamacada Banaadir.
“Wafdiga Jaamacada Makerere ay noo soo direyso waxaa hogaaminaya hormuudka kuliyada Ingineering ee jaamacadaas iyo saddex Profesor oo nala joogaya labo todobaad, waxayna nagala shaqeyn doonaan sidii dib u habeyn iyo casriyeyn loogu sameyn lahaa kuliyadda Ingineeriya” ayuu yiri Gudoomiyaha oo shaaca ka qaaday in Jaamacada Banaadir ay sanadkan ku guuleysatay iney noqoto Jaamacadda 1aad ee Somalia iyo 20-ka Jaamacadood ee ugu sareeya Afrika, taasoo uu xusay iney tahay guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed.
Heyadda caalamiga ah ee ILO ayuu u mahad celiyey gudoomiye Dalmar, taasoo uu tilmaamay iney sanad walba tababaro gaagaaban dalka gudihiisa iyo dibeddiisa ku siiyaan macalimiinta kuliyadda Ingineeriya ee Jaamacada Banaadir, waxayna noo balan qaadeen ayuu yiri iney deeq waxbarasho siin doonaan afar ka mid ah lixda ingineer ee dhowaan ka qalin jibaneysa kuliyada Ingineeriya, waxay kaloo noo balan qaadeen ayuu yiri sheybaar casri ah oo loo adeegsado Ingineerinka iyo qalab kale.
Prof. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah asaasayaasha iyo macalimiinta Jaamacada Banaadir oo isna munaasabadaas ka hadlay ayaa sheegay in maamulka iyo mu’asasada Jaamacada ay dedaal iyo maal badan geliyeen horumarinta kuliyadda Ingineeriya.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay niyada iyo dedaalka ay muujiyeen ardayda kuliyada Ingineeriya iyo xurmada ay u hayaan Jaamacadda Banaadir oo runtii ah jaamacad aqoonsi caalami ah heysata” ayuu yiri Prof-ka.
Dufle oo sidoo kale ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada Baarlamanka Somalia ayaa sheegay in maamulka Jaamacada Banaadir ay sii wadi doonaan dedaalkooda ku aadan sidii ay u soo saari lahaayeen aqoonyahano Soomaaliyeed oo tayo leh.
Waxaaa sidoo kale munaasabadaas ka hadlay ku-simaha hormuudka kuliyadda Ingineeriya ee Jaamacada Banaadir Eng. Maxamed Macalin Xasan (Caadil) oo ku dheeraaday faa’iidooyinka ay tababarada noocan ah ka heli karaan ardayda loo furay iyo waxyaabaha ay ka kororsan doonaan mudada uu socdo.
Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kuliyada Ingineeriya ee Jaamacadda Banaadir oo iyana ka hadlay madashaas ayaa maamulka Jaamacadda uga mahad celiyey tababarka aqoon kororsiga ah ee ay u fureen xiliga fasaxooda, waxayna balan qaadeen iney si hufan uga faaideysan doonaan tababarkan mudada bisha ah ee uu socon doono.